“मलाई प्रभावित परेको मेरो रिसले-मेरो आवेगले अरु कसैले पनि हैन” – Nepal Japan
नेपाली समय : 11:36:37
जापानी समय : 02:51:37
2 October, 2019 14:20 | अन्तरवार्ता | comments | 53700 Views
सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार गरेको भनिएकी महिला रोशनी शाहीले आफ्नो पूर्व भनाईलाई बंग्याइएको र सो दिन महरा आफ्नो कोठामै नआएको नागरिक टुडे अनलाइनसंगको अन्तरवार्तामा बताएपछि यो विषयले नयाँ मोड लिएको छ । उनी आफू डिप्रेसनको शिकार भएकाले आवेशमा केही कुरा भनेको तर उहाँ आफ्नो कोठामा नआएको अर्को सनसनीपूर्ण अन्तरवार्ता दिएकी छिन् ।
सोही भिडियो अन्तरवार्ताको अंश यहाँहरुसमक्ष प्रस्तुत छ । यो कुराकानीको शब्द र वाक्य जस्ताको तस्तै उतारिएको छ ।
नमस्कार म रोशनी शाही घर मेरो जाजरकोट तर हाल चाही काठमाडौँ र म एक सरकारी कर्मचारी हुँ, नर्सिङ्ग स्टाफ र म अहिले चाही संसद सचिवालयमा स्वास्थ्य इकाई छ र त्यहि काम गर्छु ।
० तपाईंसंग अहिले मैले गरिरहेको कुराकानी प्रशारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
० अब यो जुन सभामुख महरासंग जोडिएको केश आयो यो चाही वास्तविकता के हो ?
त्यहि त मलाई अब मिडियाहरु पनि अलिकति त्यो आफूप्रति उ भएर हिड्नु पर्यो, किन भने भकैनभाको कुराहरु पनि त्यहाँ आएको रहेछ, त्योबाट त्यस्तो कुराहरु नल्याईदिएको भए हुन्थ्यो ।
जस्तो के कस्तो कुराहरु आयो ?
जस्तो उहाँ (महरा) आउनै भएको छैन, नआएको मान्छेलाई पनि आएको भनेर भनिएको छ । जब कि उहाँसंग भेट भन्नाले संसदमा प्रेसरहरु जाँच गर्ने क्रममा भेट हुन्थ्यो, फोनमा पनि कुराकानी हुन्छ कहिलेकाहीं र फेरि कस्तो भने मैले कसरी सोच्छु भने उहाँलाई मेरो चै बुवा जस्तो के, अब उमेर पनि मेरो बाउकै जस्तो छ । त्यहि भएर मैले उहाँलाई यति रेस्पेक्ट गर्छु कि, बाउलाई गर्नुपर्ने रेस्पेक्ट उहाँलाई गर्छु । अब यदि बाउ छोरीकै नातामा अब कसैले शंका गर्छ र अनेक थरिको उ गर्छ भने मलाई त्यसमा चाहिं के लिनु दिनु छैन र त्यो उहाँहरुले नै भोग्नु हुन्छ ।
० तपाइको भनिएको भिडियो छ नि, त्यो भिडियो गलत हो त के कि तपाईंले भन्दाखेरि त्यति बेला केहि कारण थियो ?
होइन कारण चाहिं के थियो भने मैले चाहिं एक चोटी सभामुख ज्यूसंग हाम्रो यो समायोजनको कुरा पनि भा थियो, अलिकति मलाई डिप्रेशन पनि छ, त्यस्तै छ र अहिले म औषधि पनि खाइरहेको छु, अनि समायोजन पनि भयो र फेरि बागमती धेरै दुर्गमै ठाउँमा भा छ र त्यो पनि मिलाइदिनु भनेर भनेको थिए मैले अनि हुन्छ हुन्छ भन्नु भयो, हुन्छ भन्नुभयो अब त्यो त्यतिकै उहाँले गर्नु भएन र नगरेपछि मलाई पनि रिस उठ्यो के कुनै पनि सानोतिनो कामहरु पनि नहुने अब के भनौ न, हामीले आशा राख्ने कहाँ त भन्दाखेरि अब अभिभावकसंग नै हो ।
अब दुनियादारीसंग मतलब पनि छैन जो व्यक्ति हो जो स्वयं व्यक्ति नै त्यहीं हुनुहुन्छ भने हामी किन टाढा जानु भनेर चाहिं त्यहाँ मैले उहाँसंग सरुवादेखि लिएर कुरा गर्थे भनेको थिए र फोनबाट यो विषयमा धेरै झगडा पनि भयो र मैले भन्नु नभन्ने पनि भने, अनि तर अब हरेक कुराहरु साना तिना कुराहरु पनि नगर्दिदा खेरि चैं अनि के हो त किन नगर्दिएको त, अनि मैले कति पनि भने त भने हाम्रो टाउकोमा टेकेर ठाउँमा आउनुभयो अनि ठाउँमा आइसकेपछि त्यो त हजूरहरुले पनि त एउटा मेरो लागि कसले कति गरेको छ भनेर मूल्यांकन गरेर यति जाबो सानोतिनो कुराहरु पनि हजूरहरुबाट हुँदैन भने अब अरु के आशा गर्ने भनेर यस्ती विषय चैं धेरैपटक झगडा भयो यस विषयमा ।
० अनि अब जुन घटना भनियो, जस्तो चस्मा भाँचिएको कुरा, जुत्ताको कुरा
चस्मा त म पनि लगाउँछु, जुत्ताहरु हजूरहरु पनि लगाउँनु हुन्छ, त्यसको तलावाकै हिसाब गर्ने हो भने अब त्यो तलवा लगेर उ गरेर त्यो कुनै केहि छैन के त्यसलाई चै हेरी तोडमोड गरेर त्यो तलवा, जुत्ता लगाउने मान्छेले त त्यो तलवाको कुरा पनि आउँदैन तर चस्माको कुरा चस्मा त म पनि लगाउछु, मेरो हजबेन्डले पनि लगाउनु हुन्छ । मेरो श्रीमानको फुटेको होला त्यहाँ चस्मा ।
० अब मलाई अझ सजिलोसंग बुझ्ने गरी भनिदिस न आम मान्छेमा एक प्रकारको तपाईंप्रति सहनाभूति पनि हुनेछ सभामुखबाटै यस्तो खालको कार्य भयो भन्ने खालको कुराहरु छ, अस्ति भएको घटनाहरु केके हो त ल भनिदिनुस न सरर्र, अस्तिदेखि हिजोसम्म आइपुग्दासम्म केके कुरा गर्नुभयो र कसरि भयो भन्दिनुस न ?
कसरि भयो भन्दा खेरि पनि, यहाँ त कसले भन्ने कुरामा जान्छु ।
० अब तपाईले नै गर्या जस्तो देखिन्छ, भिडियो हेर्दा त तपाई जस्तै ?
मैले चाहिं यहि हो मसंग भएको, मैले भनेको कुरा चाहिं एउटा बाउ छोरीको नातामा चैं कसैले शंका गर्छ भने त्यो त अब अभियस्ली हजूरहरुको पनि छोराछोरी होलान, के सबैलाई शंका गर्दै हिड्ने त, के बोल्नै नहुने, के बोल्यो भन्दैमा शंका गर्ने ? अनि आउँदै नआएको मान्छेलाई आको भन्ने ? त्यस्तो, त्यस्तो खालको ब्लेम (आरोप) चैं लगाउने भन्ने चैं सुनियोजित ढंगले उहाँलाई पद्चुत गरेर आफूचाहिं त्यसमै इस्टाब्लिस हुने खालको माहोल देखे क्या मैले । फेसबुकमा हिजो मात्रै मलाई यतिको रिबोर्ट भको छ भन्ने पनि थाहा थिएन । मैले हिजोमात्र हेरेको फेसबुक, र यस्तो भैसकेको रहेछ भन्ने चाहिं मैले हिजो थाहा पाए ।
० तपाईंलाई कल्ले चाहिं तपाईंलाई मोटिभेट गर्यो भन्ने लाग्छ त् ? आफैलाई त मोटिभेट गरे होलान तर तपाईंले भनेकै तपाईंको बोली छ, तपाईंकै रुमका कुराहरु छन्, यी चाहिं तपाईंलाई कसले प्रभावित पार्यो त तपाईंलाई उसो भए ?
मलाई प्रभावित परेको मेरै रिसले हो । मेरो रिसले मेरो आवेगले अरु कसैले पनि हैन ।
० कसरी पुग्नु भयो मिडियासंग ? मैले त्यो घटनाक्रम सोध्न खोजेको, कसरि कसरि भयो ?
हो त्यो मिडिया आएको छ नि तो पनि अचम्म लाग्छ नि, मेरो कोठा खोजेर त्यो मिडिया आयो कसरी मलाई अचम्म लाग्यो नि । कि त मेरो पहिलेदेखि नै पिछा गरेको हुनसक्छ त्यो मान्छेले पिच्छा गरेर मेरो घर पनि देख्यो होला त्यहि भएर आउन पनि सजिलो भयो होला उल्लाई अनि आएपछि उल्ले अब तपाईंको थोरै कुराकानी गर्छु भन्नुभयो अनि म एक त आफैं पनि अलि फरक किसिमको भाको थिए, औषधि पनि लिरहेको छु । त्यो दिन चैं मैले हाइ डोज पनि लिए रिस उठेर । अनि ठ्याक्कै म सुतिरहेको थिए, अनि ढोकाको त्यो बज्यो के बजिसकेपछि घरभेटी पनि कोहि नभाको बेला चै अझै भनेर पनि जानु भाको थियो मलाई नानु हामी माइतमा जान्छौ अलि ढिलै हुन्छ होला ढोकासोका चैं नलगाउनु होला भनेर भन्नु भाको थियो । फेरि फोन गर खोल भन्दा हामी चाडै आउँछौ भनेर जानु भाको थियो ।
अनि एक्कासी एकजना मान्छे आउनु भयो, मेरै रुममा, रुममाभन्दा पनि पहिला घन्टी बजाउनु भयो अनि बजाईसकेपछि म उठेर हेरे, हेरेपछि एकजना केटा मान्छे हुनुहुन्थ्यो । अनि कसलाई खोज्नु भ्जो भनेर भने मैले, त्यो भनेपछि त्यो मान्छेले तपाईं रोशनी शाही हो भन्नुभयो, मलाई त के थाहा मैले त हो भने । हो म नै हो किन र भनेर भने मैले । त्यसपछि उसले अलिकति ढोका खोलेर भित्र आयो, आइसकेपछि तपाईंसंग केहि कुरा गर्नु छ, गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्नुभयो । तर मलाई थाहा थिएन कि उहाँले यो कुरा गर्न आको भनेर है त्यो चैं थाहा भएन मलाई । अनि मैले चाहिं मिल्छ किन नमिल्नु भने । अनि उहाँले एउटा ट्याब र एउटा मोबाइल लिएर आउनु भाको थियो ।
अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नु भयो भने तपाईंको बारेमा मलाई एकजना दिदीले पठाउनु भको भन्नु भयो । मैले को दिदि भनेर सोधे । तर उहाँले नाम भन्नु भएन । दिदीले पठाको मात्र भन्नु भयो । अनि को दिदीले पठाउनु भको नाम भन्नु न अनि हजूर कहाँबाट आउनु भको भनेर, के हो कसो हो र कसरी यहाँ आउनु भयो भनेर सोधे । सोध्दा खेरि मलाई एउटा दिदीले पठाउनु भको मात्र भन्नु भयो नाम चैं भन्नु भएन । नभने पछि मा तपाईंसंग थोरै टाईम लिएर थोरै कुरा गर्छु भन्नु भयो । अनि मैले के विषयमा भनेर सोधे सोध्दा चै यहाँ चैं यस्तोयस्तो कुरा सुनियो अनि के हो त भनेर बुझ्न आको भन्नु भयो । मैले के कुरा सुन्नुभयो त् भने ।
उहाँले सभामुखज्यूले तपाईंलाई सेक्ससुयल ह्यारासमेन्ट गर्नु भयो रे अनि यता उति केके भयो रे भन्ने सुनेर म आको भन्नु भयो । को मार्फत सुन्नु भयो त हजूरले, त्यो भन्नु न त व्यक्तिको नाम भनेर भन्दाखेरि दिदी मात्र भन्नु हुन्छ, उहाँले नाम नै भन्नु भएन । नभनिसकेपछि उहाँले केके भयो भनेपछि मैले केही पनि भको छैन, सभामुखज्यू न यहाँ आउनु नै भा छ नआको मान्छेलाई आको भनेर मैले कसरी भन्ने ? अनि तपाईं पनि एक्कासी आउनु भा छ अनि तपाईं नयाँ मान्छेलाई सबथोक किन भन्नु ? कि चैं तपाईंले मलाई पहिले खबर गरेको भए अथवा के भयो भन्या भए हुन्थ्यो । तर फेरि तपाईं दिदी भन्नु हुन्छ दिदीको नाम पनि लिनु हुन्न अनि मैले तपाईंलाई कसरी विश्वास गरेर मैले नआको मान्छेलाई आको भन्दिने त यहाँ केहि पनि भको छैन ।
हैन के चैं भको छ तपाईंले कुरा लुकाउनु भको छ भन्नुभयो । कुरा लुकाउनु पर्ने कुरै छैन । किन कुरा लुकाउनु जबर्जस्ती यहाँ कोही मान्छे आको छ भनेर त भन्नु भएन नि । म पीडित हुँ भनेर सोध्न आउनु भको भए म स्वयं पीडितले नै हो सामना गर्ने अनि हजूरलाई केको टेन्सन ? अर्काको व्यक्तिगत मामलामा तपाईं चाहिं यत्तिको चासो राख्ने अनि उतातिर बाटो भत्क्या छ, त्यो पानी आ छैन त्यस्तोत्यस्तो कुरामा जानु न बरु । अर्काको पर्सनल लाइफमा चैं फनालाले उसको गर्यो तिनालले उसो गर्यो, फलानोले के खायो त्यो होइन नि त पत्रकारको कुरो । पर्सनल लाइफ त हजूरको पनि हुन्छ मेरो पनि हुन्छ, उसको पर्सनल लाइफमा त मैले इन्टरफियर गर्न मिल्दैन त । अनि मैले नाको मान्छेलाई किन आको भनेर जबर्जस्ती भन्ने । उहाँ आउनै भाको छैन अब ती संसदमै काम गरे पनि भेटै हुँदैन भनेपछि कहिलेकहिँ चाहिं एक दम रियर केशमा चै प्रेसर हाइ भयो भने बोलाउनु हुन्छ हामीलाई । तर यो चैं के भयो भने जबर्जस्ती आकै हो भनेर हामीले सुन्या हो तपाईंलाई यसोयसो गर्यो भनेर भन्दा मैले नआको मान्छेलाई आको भनेर भनिन ।
अर्को कुरा एउटा बाउ समान जस्तो अभिभावक समान जस्तो मान्छेलाई सेक्समा जोड्न चैं मिल्दैन । त्यो तपाईंहरुलाई पनि भोलि हुन सक्छ नि । अनि तपाईंका पनि छोराछोरी होलान अनि त्यस्तो ब्लेम लगाउने । अनि भको नभाको कुरालाई हो भन्दिने । म त नभाको कुरालाई नभाको नै भन्छु किन हो भन्ने कसैलाई बदनाम गर्नको लागि यो त सुनियोजत ढंगले तपाईं आउनु भको हो रैछ भन्ने मैले थाहा पाए । म अब केहि पनि बोल्दिन, मेरो त्यो फोटोसोटो खिच्ने काम पनि नगर्नुस । म अब योभन्दा बढी बोल्दिन, मलाई केहि कुरा पनि थाहा छैन म अझै पनि अप्सेट छु भनेर भनेपछि ठिकै छ म्याडम भन्दै तपाईंले पुलिसलाई पनि बोलाउनु भा थियो रे भन्नुभयो उहाँले ्र अनि त्यो बोलाउने नबोलाउने मलाई थाहा छैन, मलाई रिसको झोकमा मैले ककसलाई फोन गरे थाहा छैन यहीं को कुरा । तपाईंहरुले जतिसुकै घुमाएर फिराएर के गरे पनि कुरा निष्कर्षमा यहि हो उहाँ आउनु भएको छैन ।
० अनि कसरी सहमत हुनु भयो त तपाईंको भिडियोमा त उहाँ आएको गएको कुरा छ त् ?
त्यही त कसरि भयो बरु उहाँ आउनु भएको भए हुन्थ्यो ।
० तपाईंले बोलेको भ्वाइस होइन त्यसो भए त्यो ?
मैले बोलेको त यहि हो अब नआको मान्छेलाई मैले आको भन्दिन र उहाँले के भन्नु भयो भयो । होइन आउनु नै भा थियो रे भन्नु हुन्छ । अनि तपाईंले कहाँबाट देख्नु भको रे त, रे को कुरोमा नजानु न फ्याक्ट कुरा के हो त्यो बोल्नुस न । तपाईं सुनियोजित ढंगले आउनु भको रैछ, तपाईंलाई कसैले पठाको रेछ, दिदी पनि भन्नु हुन्छ, दिदीको नाम पनि भन्नु हुन्न भनेपछि अनि शंका गर्ने विषय भयो नि त । मैले आफ्नो बाउ सरहको मान्छेलाई बदनाम गराउनको लागि म जे पायो त्यहि भन्दिन र यस्ता कुरा लिएर तपाईंहरु पनि नआउनुस भने अनि त्यसपछि उहाँ जानुभयो ्र उहाँले केहि फोटो पनि खिच्नु भा रैछ हिजो मैले देखेको थिए ।
० अनि त्यो चस्माको टुक्रा र जुत्ता चै कसको त् तपाईंकोकि तपाईंको श्रीमानको कि महरा सरको कि कसको ?
० तपाईंले अघिल्लो दिन नै भाच्नु भा थियो कि ?
हाम्रो पनि कस्तो भयो भने मेरै श्रीमानसंग पनि यहि कुरामा झगडा हुन्छ कि जस्तो कि यत्तिको काम हामीचाहिं नेताको लागि कति मरिमेटेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका मान्छे उहाँहरुलाई माथि पुर्यायौं, अनि हाम्रो चाहिं त्यति पनि काम नगर्दिने भनेर सरसंग म रिसाउँथे । रिसाउँदाखेरि अब उहाँहरुलाई पनि गार्है हुन्छ नि मिलाउनको लागि सबैलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ गार्हो हुन्छ यसमा तिमी झर्कीफर्की नगर भन्नु हुन्थ्यो क्या मलाई । तर मेरो श्रीमानसंग पनि झगडा भै रहन्थ्यो यतिसम्म हुन्थ्यो कि लुछाचुडी नै हुन्थ्यो के । अब त्यो लुछाचुडीमा चस्मा भाचियो होला भाचिन पनि सक्छ ्र त्यो चस्मा जुत्ताको तलवा लिएर सानासाना कुरा लिएर एउटा रिज्युम बनाउने अर्कालाई ह्यारसमेन्ट गर्न खोज्ने जस्तो कि मलाई त्यो दिन ।
० अनि महरा सरको फोन आएको कुरा पनि त्यो भिडियोमा छ, महरा सरले फोन नगर्नु भयो कि फोन गर्नु भयो कि अरु केहि गर्नु भन्नु भा थियो कि ?
गर्नु भा थियो उहाँले अनि समायोजनको कुरा निस्क्यो के अनि त्यो विस्तारै हुन्छ तपाईं नआत्तिनुस यहाँ मैले पनि गरिरहेको छु तर तपाईंको चिट्ठी चैं आछैन त्यहि पनि म मिलाउँदै छु यसमा चै धेरै आवेगमा नआउनु भनेर भन्नु भाको चै हो ।
० भनेपछि तपाईंले महरा सरलाई फोनबाट पनि धम्कि दिनु भको थियो ?
हो दिएको चै हो । धम्की भन्दा पनि झगडा चै हुन्थ्यो क्या यहि कुरामा । अब त्यसलाई सोच्नेले कस्तो किसिमले सोच्नुहुन्छ । म चै एकदमै क्लोज भएकोले बाउ सामानको मान्छे भएकोले उहाँसंग झगडा पनि गर्थे सरसल्लाह पनि गर्थे अनि सरसल्लाह लिन्थे पनि अनि उहांलाई दिन्थे पनि त्यहि नै हो । अब त्यसलाई चाहिं एउटा सेक्सुयल ह्यारसमेन्टमा लगेर अनि दुनियालाई बदनाम गर्ने चै…..